Gargaar ka Yimid Turkey oo Gaaray Gaza
Baabuur xamuul ah oo sida 10,000 oo tan oo gargaar ah oo ka yimid dalka Turkiga ayaa billaabay inay yimaadaan magaalada Gaza, ayaga oo soo maraya Israel, toddobaad kadib markii Israel iyo Turkey ay dib usoo celiyeen xiriirkooda.
Baabuurtii ugu horeysay oo gaaraya illaa 500 oo sida alaabaha ilmaha ku cayaaraan, daybarka saxarada iyo kaadida ilmaha ka celiya, dhar, dawo iyo cunto ayaa Isniintii shalay soo galay Gaza, ayada oo kuwa kaleana la qorsheynayo inay yimaadaan maalmaha soo socda.
Gargaarka ayaa imanaya waxyar un ka hor maalinta Ciidul Fitriga ee Arbacada.
Xiriirka ka dhaxeeya Israel iyo Turkey ayaa burburary bishii may ee 2010 kadib markii ciidamada badda Israel ay weerar ku qaadeen Markab Turkish ah oo gargaar u siday Gaza, ayaga oo dilay 10 qof oo Turkish ah.
Israel ayaa xannibaad kusoo rogtay Marinka Gaza sanaddii 2006 kadib markii kooxda Xamas ay afduubatay askari Israeli ah.
Israel ayaa sheegtay in xanibaaddan ay muhiim tahay si Xamas looga ilaaliyo inay hesho qalab loo adeegsan karo ujeedooyin milatari. QM ayaa kasoo horjeedda xannibaaddan.
Qarax ka Dhacay Meel u Dhow Masjidka Nabiga NNKH
Uganda oo Dib Uga Fiirsaneysa ka Bixitaanka Somalia
Al-Shabaab oo Afar Qof ku Dishay Galcad
Warbixin gaar ah: Habka Soo Xulista Ergooyinka Doorashada